जुत्ता पालिस गरेर देश बन्छ ? : रामहरि खतिवडा (अन्तर्वार्ता)
प्रकाशित मिति : २०७४ माघ १८ बिहिबार , १६,६१४ पटक हेरिएको
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता रामहरि खतिवडाले जुत्ता पालिस गरेर मात्रै मुलुक निर्माण नहुने बताएका छन् । नेता खतिवडाले जुत्ता पालिस गर्न सडकमा जाने नेताले सन्त नेता किसुनजीको नामको दुरुपयोग गरेको बताए । नेपालको राजनीतिमा शुद्धिकरण चाहिएको छ, तर सन्त नेताको नामको दुरुपयोग गर्न नहुने तर्क खतिवडाको छ । यसै विषयमा खतिवडासँग हामीले संक्षिप्तकुरा गरेका छाैँ ।
० चुनावमा पराजित भइसकेपछि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
० तपाईं जिल्लामा कम्बल वितरण गर्ने, कोही राजधानीमा जुत्ता पालिस गर्दै थिए ?
० तपाईंको समर्थन छ ?
० तपाईंको धारणा फरक समूहको हो ?
० हिजो जस्तै छ कांग्रेस ?
– हिजोको जस्तो कांग्रेस अहिले छैन, पोलिस गर्न बाटामा बस्ने साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु, किसुनजी अन्तिम समयसम्म हिन्दूअधिराज्यको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो, भलै म अहिले त्यो पक्षमा छु छैन बेग्लै कुरा हो । किसुनजी संवैधानिक राजाको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो । पोलिस गर्नेहरु संवैधानिक राजाका पक्षमा हुनुहुन्छ ? देखाउने किसुनजी, काम अर्कैतिर गर्ने हो भने गलत हुन्छ ।